लिम्वूवान - विविध सामग्री: ओबामालाई नोबेल 'युद्ध' पुरस्कार
नोबेल समितिले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बाराक ओबामालाई दिने घोषणा गरेपछि सारा विश्व चकित भयो । यो खबर सुन्नेबित्तिकै संसारभरिका मानिस विश्व-शान्तिका क्षेत्रमा बाराक ओबामाले के-के गरेछन्, खोजिनिती गर्न थाले ।
धेरैको प्रश्न यौटै थियो— कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धिविनै राष्ट्रपतिका रूपमा १० महिनाभन्दा कम समय बिताएका ओबामा कसरी नोबेल पुरस्कारका लागि छनोट भए ? सत्य के हो भने ओबामाले राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेर जे गरेका छन्, त्यसको शान्तिसित गोरु बचेको साइनो पनि छैन ।
नोबेल पुरस्कारको घोषणापछि ओबामा ह्वाइट ह्वाउसको रोजगार्डेनमा झुल्किए र आफू 'चकित र कृतकृत्य' भएको घोषणा गरे । त्यसपछि, युद्धपरिषद्का सदस्यहरूसित अफगानिस्तानमा थप फौज पठाउने, त्यहाँ र पाकिस्तानी सीमाक्षेत्रमा धुवाँदार बमबारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न उनी तुरुन्तै ह्वाइट हाउसभित्र छिरिहाले ।
यता, नोबेल समिति उनको 'परमाणुअस्त्रमुक्त दुनियाँको सपना'को प्रशंसा गर्दै थियो । उता, उनको प्रतिक्रिया थियो, 'यो सपना मेरो जुनीमा पूरा नहुन सक्छ ।' किनभने, उनको प्रशासनले मस्कोसँगको वार्तामा अमेरिकाले कम्तीमा १५ सय पारमाणविक क्षेप्यास्त्र राख्न पाउने अधिकारको माग गरेको छ । आफू के बोलिरहेका छन्, राम्रोसँग जान्दछन् उनी ।
ओबामालाई कुनै शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । कुनै सेनापति, जो कैयौँ युद्ध अपराध (जस्तो कि गत मे महिनामा सयौँ निर्दाष अफगानी जनताको ज्यान जानेगरी गरिएको बमबारी) का लागि जिम्मेवार छ, कसरी शान्तिवाहक हुनसक्छ ?
उसो त, नोबेल शान्ति पुरस्कार सदा विवादास्पद रहिआएको छ । सन् १९७३ मा हेनरी किसिन्जरलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेदेखि गिरेको यसको साख अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन । हेनरी किसिन्जर युद्धअपराधीका आरोपमा गिरफ्तार भइने डरले हाल अमेरिकाबाहिर जान सकिरहेका छैनन् । उनीसँगै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका भियतनामी नेता ले दुक थोले भने अमेरिकासँगको सन्धिले आफ्नो देशमा शान्ति ल्याउन नसकेको भन्दै पुरस्कार अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, सन् २००२ मा जिम्मी कार्टरलाई पुरस्कृत गरियो, जो अफगानिस्तनमा युद्धको सूत्रपात गर्ने मान्छे थिए । यस युद्धमा लाखौँ मानिसको ज्यान गएको थियो ।
वास्तवमा नोबेल समितिलाई आफ्ना सिद्धान्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने ठाउँ छैन किनभने यसका सिद्धान्त छन् नै त्यस्ता । नोबेल पुरस्कारका संस्थापक अलफ्रेड नोबेल डाइनामाइटका आविष्कारक थिए । म्यासिभ अड्र्यान्स पिनिट्रेटर -भूमिगत आक्रमणमा प्रयोग गरिने तीस हजार पाउन्ड वजन भएको बम को उत्पादन गर्न हतारिरहेको पेन्टागनप्रति सायद अल्पmेड नोबेलले कुनै आपत्ति जनाउँदैनथे । यो हतियार इरानविरुद्ध सम्भावित प्रयोगका लागि तयार गरिँदै छ ।
ओबामाको 'दृष्टिकोण' का लागि र 'विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्दै मानिसलाई सुन्दर भविष्यको आशा बाँडेेका' कारण नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको भने पनि नोबेल समितिले ओबामालाई उनको चुनावी अभियानताकाका भ्रामक भाषण र वाक्पटुतामा आधारित भएर पुरस्कार दिएको होइन । नोबेल शान्ति पुरस्कार केही निश्चित नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ दिइन्छ, दिइँदै आएको छ ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार छनोट समितिमा नर्वेली संसद्का प्रमुख पार्टी (उग्र दक्षिणपन्थीदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादीसम्म) का पाँच सदस्य थिए । यस समितिको निर्णय समग्रमा युरोपेली एलिटको प्रतिविम्ब हो । समितिका अध्यक्ष, पूर्वनर्वेली प्रधानमन्त्री थर्बजर्न जगल्यान्डले शुक्रबार न्युयोर्क टाइम्सलाई ओबामाको बचाउ गर्दै भनेका थिए, 'समितिले संघर्षशील र आदर्शवादी मानिसको पहिचान गर्नु जरुरी छ, तर प्रत्येक वर्ष हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ । बेलाबेलामा हामीले राजनीतिको यथार्थ-संसारमा प्रवेश गर्नैपर्छ ।'
यथार्थ-राजनीतिले निःसन्देह २००२ मा जिम्मी कार्टर र २००७ मा अल गोरको छनोटमा अहम् भूमिका खेल्यो । कार्टरलाई इराकयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा पुरस्कारका लागि छनोट गर्नु बुस प्रशासनको आक्रामक एकपक्षीयताको निन्दा थियो । त्यस्तै, सन् २००० मा राष्ट्रपति उम्मेदवार रहेका अल गोरलाई नोबेल पुरस्कारका लागि छनोट गर्नुको अर्थ थियो— युरोप बुस प्रशासनको समाप्ति चाहन्थ्यो । ती वर्षमा नोबेल पुरस्कारलाई अमेरिकी विदेशनीतिको आलोचनाको संकेतका रूपमा प्रयोग गरियो भने यस वर्ष यसले अमेरिकी विदेशनीतिको समर्थनको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
अफगानिस्तानमा थप अमेरिकी फौज तैनाथ गर्ने तयारी गरिरहेका ओबामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनु स्पष्टतः विरोधाभाषपूर्ण छ । पुरस्कारको लक्ष्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान र इराकमाथि वासिङ्टनको आक्रमणलाई वैधता प्रदान गर्नु र यसलाई शान्तिका लागि युद्धका रूपमा युरोपको स्वीकृतिको टाँचा लगाउनु हो । युरोपका सरकारहरूले अमेरिकी हस्तक्षेपको समर्थन गर्नु मध्यएसिया र पर्सियन खाडीका सञ्चित ऊर्जाको लुटमा आफू पनि संलग्न हुने अवसरको ढोका खोल्नु हो भन्ने राम्ररी बुझेका छन् ।
ओबामालाई दिइएको नोबेल शान्ति पुरस्कारले संसारको विशालतम सैन्य शक्ति शान्ति उन्मुख भइरहेको संकेत कुनै पनि हालतमा गर्दैन । यसले त सैन्यवाद र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू झन्-झन् व्यापक हुने खतराको संकेत गर्छ ।
(बिल भान अकेन www.wsws.org का स्तम्भकार हुन् । उनी २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खडा भएका थिए ।)
Posted by limbu at 7:34 AM